मार्केटिंग डाटा: २०२१ मा र बाहिर पछाडि स्ट्यान्ड कुञ्जी Martech Zone
वर्तमान दिन र उमेर मा, को लागी तपाइँको उत्पादनहरु र सेवाहरु को बजार गर्ने, र तपाइँको ग्राहकहरु के चाहिन्छ थाहा छैन को लागी कुनै बहाना छैन। मार्केटिंग डाटाबेस र अन्य डाटा-संचालित टेक्नोलोजीको आगमनको साथ, असहज, अचयनित, र जेनेरिक मार्केटिंगको दिन गयो।
एक छोटो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य
१ 1995 1995 Before अघि मार्केटिंग प्राय: मेल र विज्ञापन मार्फत गरिएको थियो। १ 2007 XNUMX After पछि, ईमेल टेक्नोलोजीको आगमनको साथ, मार्केटिंग केही अधिक विशिष्ट भयो। यो स्मार्टफोनको आगमनसँगै थियो, विशेष गरी २०० XNUMX मा आईफोन, मानिसहरूले वास्तवमै सामग्रीमा अंकुश लगाउन थाले, अब उनीहरूको स्क्रीनमा सजिलैसँग पहुँचयोग्य छ। अन्य स्मार्टफोनहरू त्यसको लगत्तै बजारमा क्रप भयो। स्मार्टफोन क्रान्तिले मानिसहरूलाई व्यावहारिक कहिँ पनि स्मार्ट ह्यान्ड-होल्ड उपकरण बोक्न अनुमति दियो। यसले बहुमूल्य प्रयोगकर्ता प्राथमिकताहरू डेटालाई घडीको वरिपरि उत्पन्न गरायो। सान्दर्भिक सामग्रीको उत्पादन र सही व्यक्तिहरूको लागि सेवा व्यवसायको लागि एक मुख्य मार्केटिंग रणनीति बन्न सुरु भयो, र यो अझै पनि मामला हो।
२०१ to मा आउँदैछ र यस पनी हेराई गर्दैछौं, हामी यो देख्छौं कि प्रयोगकर्ताहरू उनीहरूको हातले समातेको ग्याजेटहरूमा निर्भरताका साथ उच्च मोबाइल छन्। आज मार्केटिंग डाटा खरीद प्रक्रियाको प्रत्येक चरणमा क्याप्चर गर्न सकिन्छ। मार्केटरहरूले उनीहरूका ग्राहकहरू के चाहन्छन् भनेर फेला पार्न उनीहरूले पहिले कहाँ हेर्ने भनेर जान्नुपर्दछ! डाटाले सम्भावित ग्राहकहरूको सामाजिक मिडिया गतिविधि, ब्राउजि behavior व्यवहार, अनलाइन खरीदहरू, लगानी बान्की, पीडा पोइन्ट, खालि खाडाहरू, र अन्य महत्वपूर्ण मेट्रिक्समा मूल्यवान अन्तर्दृष्टि दिन सक्छ। यस प्रकारको मार्केटिंग डेटा कुनै पनि आकर्षक मार्केटिंग रणनीतिको मूल हुनेछ।
मार्केटिंग डेटा स for्कलनको लागि आधारभूत रणनीतिहरू
आँखा चिम्ले डाटा स collecting्कलन नगर्नुहोस्! त्यहाँ उपलब्ध मार्केटिंग डाटाको एक दुर्गन्ध योग्य क्वान्टम छ, र तपाईंलाई प्राय: यसको एक सान्दर्भिक हिस्सा मात्र चाहिन्छ। डाटा संग्रह तपाईंको व्यवसायको प्रकृति र चरणमा निर्भर हुनुपर्दछ जुन तपाईंको कम्पनी विकास चक्रमा खडा छ। उदाहरण को लागी, यदि तपाई सुरूवात गर्न लाग्नु भएको छ भने तपाईले बजार अनुसन्धान उद्देश्यका लागि बिभिन्न किसिमको डेटा स .्कलन गर्नु पर्छ। यसले समावेश गर्न सक्छ:
लक्षित समूहको ईमेल ठेगानाहरू
सामाजिक मिडिया प्राथमिकताहरू
बानी किन्ने बानी
मनपर्दो भुक्तान विधिहरू
व्यवसाय मा फर्महरु संग पहिले नै माथि उल्लिखित मार्केटिंग डेटा हुन सक्छ। अझै, तिनीहरू लगातार यी कोटीहरूमा अद्यावधिक राख्नु पर्छ पनि स while्कलन गर्दा डाटा नयाँ ग्राहकहरु को लागी। उनीहरूले मूल्यवान ग्राहक प्रतिक्रियाको पछि लाग्ने र डाटा मार्फत अवस्थित उत्पादको मूल्यमा अन्तरदृष्टि प्राप्त गर्नमा पनि ध्यान दिन आवश्यक हुनेछ।
थप रूपमा, स्टार्टअपहरू, एसएमईहरू, र ठूला प्रतिष्ठानहरूको लागि ग्राहकहरूको साथ सबै प्रकारका संचारको रेकर्ड राख्नु महत्वपूर्ण छ। यसले उनीहरूलाई ग्राहकसँग एक प्रभावी संचार रणनीति दर्जी गर्न अनुमति दिनेछ।
नम्बरहरू झूट नबोल्नुहोस्
Ke 88% मार्केटरहरूले तेस्रो पक्षहरूद्वारा प्राप्त आफ्ना ग्राहकहरूको पहुँच र समझ बढाउन डेटा प्रयोग गर्दछन्, जबकि of 45% व्यवसायहरूले यसलाई नयाँ ग्राहकहरू प्राप्त गर्न प्रयोग गर्छन्। यो पनि फेला पर्‍यो कि कम्पनीहरूले डेटा-संचालित निजीकरण प्रयोग गर्नेले मार्केटिंगमा उनीहरूको आरओआईलाई पाँचदेखि आठ पटक सुधार गर्दछ। बजारहरू जसले आफ्नो राजस्व लक्ष्यहरू पार गर्थे डाटा ered personal% समय निजीकृत प्रविधिहरू प्रयोग गर्दथे।
कुनै श doubt्का बिना, मार्केटिंग डेटा २०२० वा अधिक बाहिर सही व्यक्तिहरूमा उत्पादनहरू र सेवाहरूको प्रबर्धनको लागि आवश्यक छ।
मार्केटिंग डेटा को फाइदा
हामीलाई मार्केटिंगका फाइदाहरू गहिराइमा बुझ्न दिनुहोस्, जुन डाटा-द्वारा संचालित हो।
बजार रणनीतिहरूलाई निजीकृत गर्दछ - मार्केटिंग डेटा शुरुवात बिन्दु हो जसले मार्केटर्सलाई व्यक्तिगत संचार मार्फत लक्षित मार्केटिंग रणनीतिहरू सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ। होशियारीका साथ विश्लेषण गरिएको डाटाको साथ व्यवसायलाई राम्रो जानकारी दिइन्छ कि कहिले मार्केटिंग सन्देशहरू पठाउने। समयमै सटीकताले कम्पनीहरूलाई उपभोक्ताहरूबाट भावनात्मक प्रतिक्रियाका लागि अनुमति दिन्छ, जसले सकारात्मक संलग्नतालाई प्रोत्साहित गर्दछ।
Ke 53% बजारहरूले दावी गरे कि ग्राहक केन्द्रित सञ्चारको लागि माग उच्च छ।
MediaMath, डाटा मार्केटिंग र विज्ञापन को ग्लोबल समीक्षा
ग्राहक अनुभव बृद्धि गर्दछ - व्यवसायहरू जसले ग्राहकहरूलाई जानकारी प्रदान गर्दछन् जुन उनीहरूका लागि साँच्चिकै उपयोगी छ उनीहरूको आफ्नै लिगमा खडा हुनेछ। Ig 75 वर्ष पुरानो अटोमोटिभ क्रेतालाई किन जोरको हिसाबले खेल कारको प्रचार? मार्केटिंग डाटा-नेतृत्व अभियानहरु विशिष्ट उपभोक्ता आवश्यकताहरुमा लक्षित छन्। यसले ग्राहकको अनुभवलाई समृद्ध बनाउँछ। मार्केटिंग, ठूलो हदसम्म, अझै पनि गेष्टिमेट्सको खेल हो, र मार्केटिंग डेटाले व्यवसायहरूलाई उच्च-स्तरको शिक्षित अनुमान बनाउन अनुमति दिन्छ। डाटा-नेतृत्व मार्केटिंगले सबै उपभोक्ता संचारहरूमा समरूप जानकारी प्रदान गर्न सक्दछ। यसले एक प्रकारको ओम्निखनेललाई सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ जहाँ तपाईं तिनीहरूलाई सामाजिक मिडिया, व्यक्तिगत कुराकानी, वा फोन मार्फत सम्पर्क गर्नुभएमा, उपभोक्ताहरूले समान जानकारीको टुक्राहरू प्राप्त गर्दछन् र सबै च्यानलहरूमा उही मार्केटिंग अनुभवहरू पार गर्दछन्।
सही सage्लग्नता च्यानलहरू पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ - डाटा-संचालित मार्केटिंगले कम्पनीहरूलाई कुन मार्केटिंग च्यानलले दिईएको उत्पादन वा सेवाका लागि उत्तम प्रदर्शन गर्छ भनेर पहिचान गर्न अनुमति दिन्छ। केहि ग्राहकहरु को लागी, एक सामाजिक मिडिया च्यानल को माध्यम बाट उत्पाद संचार इच्छित उपयोगकर्ता संलग्नता र व्यवहार पैदा गर्न सक्छ। फेसबुक को माध्यम बाट उत्पन्न लीड्स Google डिस्प्ले नेटवर्क (GDN) को माध्यम बाट उत्पन्न लीड भन्दा भिन्न प्रतिक्रिया गर्न सक्दछ। मार्केटिंग डेटाले व्यवसायलाई निर्धारित गर्न अनुमति दिन्छ कि कुन सामग्री ढाँचा पहिचान गरिएको मार्केटिंग च्यानलमा उत्तम काम गर्दछ, यो छोटो प्रतिलिपि, इन्फोग्राफिक्स, ब्लग पोष्ट, लेख, वा भिडियोहरू हुन।
सामग्री गुणस्तर सुधार गर्दछ - नयाँ डाटा दैनिक ग्राहकहरु बाट मंथन मा राख्छ, र मार्केटरहरु यसलाई ध्यानपूर्वक विश्लेषण गर्नु पर्छ। मार्केटिंग लगतले उनीहरूको ग्राहकहरूको परिवर्तनशील आवश्यकताको आधारमा अझ राम्रो धुन वा तिनीहरूका पूर्व अवस्थित मार्केटिंग रणनीतिहरूलाई परिमार्जन गर्न सूचित गर्दछ। स्टीभ जॉब्सले भनेजस्तै, "तपाइँले ग्राहकको अनुभवको साथ सुरु गर्नुपर्नेछ र टेक्नोलोजीमा पछाडि काम गर्नुहोस्। तपाइँ टेक्नोलोजीको साथ सुरु गर्न सक्नुहुन्न र कहाँ बेच्ने हो भनेर पत्ता लगाउन प्रयास गर्न सक्नुहुन्न। प्रयोगकर्ताहरूको गतिशील आवश्यकताहरू राम्रोसँग बुझेर, कम्पनीहरूले मात्र नयाँ ग्राहकहरूलाई संलग्न गराउँदैन तर पुरानालाई पनि कायम राख्छ। सामग्री गुणस्तर दुवै ग्राहक अधिग्रहण र ग्राहक अवधारणाको लागि महत्त्वपूर्ण छ।
तपाईंले ग्राहकको अनुभवको साथ सुरू गर्नुभयो र टेक्नोलोजीमा पछिल्तिर जानुहोस्। तपाइँ टेक्नोलोजीको साथ सुरु गर्न सक्नुहुन्न र यसलाई बेच्न चाहानुहुन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन को लागी प्रयास गर्न सक्नुहुन्न।
प्रतिस्पर्धामा नजर राख्न मद्दत गर्दछ - मार्केटिंग डाटा पनि तपाइँको प्रतिस्पर्धी को मार्केटिंग रणनीति अवलोकन र विश्लेषण गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। व्यवसायहरूले प्रतिस्पर्धीहरू द्वारा अध्ययन गरिएको डाटाको कोटीहरू पत्ता लगाउन र उनीहरूको उत्पादनहरूलाई बजारमा छनौट गर्ने दिशाको पूर्वानुमान गर्न सक्छन्। कम्पनीले आफ्ना प्रतियोगीहरूको अध्ययन गर्न डाटा प्रयोग गर्दछ एक काउन्टर रणनीति उपकरण छनौट गर्न सक्दछ जुन उनीहरूलाई शीर्षमा बाहिर आउन अनुमति दिनेछ। प्रतिस्पर्धीहरूको अध्ययन गर्न डाटा प्रयोग गर्दा व्यवसायलाई उनीहरूको हालको मार्केटिंग अभ्यासहरू सुधार गर्न र उनीहरूको प्रतिस्पर्धीहरूले गरेका गल्तीहरू गर्न पनि अनुमति दिँदैन।
कार्यहरूमा अन्तरदृष्टि बदल्नुहोस्
मार्केटिंग डाटा कार्यशील अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्दछ। मार्केटिंग अभियानहरू सुधार गर्न, तपाईंले आफ्ना ग्राहकहरूको बारेमा जति सक्दो जान्नु आवश्यक छ। विस्तृत अभिमुखीकरण आगामी बर्षहरूमा सफलताको कुञ्जी हो। डेटा-नेतृत्व मार्केटिंग समाधानहरू कार्यान्वयन गर्नाले तपाईंको व्यवसायको तरीकालाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्न सक्दछ। जे भए पनि मार्केटर कत्ति अन्तरदृष्टि हुन्छ, त्यसले केवल शिकारीमा चमत्कारहरू प्रदर्शन गर्न सक्दैन। तिनीहरू उच्च परिणामहरूको लागि मार्केटिंग डेटाको बिन्तीबाट सशक्त हुनुपर्दछ।
टैग: Business2communeप्रतिस्पर्धी अनुसन्धानसामग्री गुणस्तरग्राहक अनुभवसगाई च्यानलहरूमार्केटिंग च्यानलहरूमार्केटिंग डाटानिजीकरणलक्ष्यीकरणप्रयोगकर्ता प्राथमिकताहरू